Genzebee Dibaabaa ta dhiyoo Monaakootti moote Waliin barana 6 dorgomtee cufaa moote, dorgommii lama rekordii haraa argatte – Welcome to bilisummaa
Genzebee Dibaabaa ta dhiyoo Monaakootti moote Waliin barana 6 dorgomtee cufaa moote, dorgommii lama rekordii haraa argatte
Atileeti Genzebee Dibaabaa atileetii addunyaa irratti dorogmmiin beekamtuu yoo dorogmmii baatu mootetuma galti.
Dorgommii barana Ammajii jalqabdeeen waliin akka soddsaa isii atileeti Sileshi Siin jedhetti marroo jahaanu moote.
Dorogmmii tana keessaa lamatti rekordi haaraa argatte.
Fiigicha Genzebeen moote keessaa Sandiyeegoo,USA m5000,
Istookoholm,Siwiidin M5000 rekordii haaraa
Osloo, Norwey m5000
Monaakoo,Faransaay 1500 rekordii haaraa
Fiigichii Genzebeen barana moote;
Istookoholm m5000 rekordii
Osloo Norwey m5000
Itoophiyaan dorgommii Atileetiksii Shaampiyoona Guddattoota Addunyaa Kolombiyaatti Medaaliyaa saddeetti argatte.
Dorgommiin guddattoota Atileetiksii addunyaa tun dorgommii atileeottii addunyaa ganna 16 fi 17 Kolombiyaatti irratti dorgomaa bahan. Itoophiyaan dorgommii tanaaf irratti atileeota 20 ergatte.
Akka obboo Duubee Jiloo Federeshiinii Atileetiksii Biyyoolessaatii jedhetti Itoophiyaan dorgommii tana irratti warqii lama badhaafamte.
Shuree Bulloo m300 warqii,Badeettuu Hirphoo m800 warqii argatte.Jarii kaanillee meetii fi badhaasa gara garaa argate.
Atileetotii tun naannoo gara garaatii dhufanii taatullee hagii guddaan Oromiyaa dhufe.
Previous Plotting of Cameron, of al-Rahman & the discovery of a Qur’an
Next Uummatni Oromoo, hanga yoomiitti gadadoo keessa jiraata?